Hive စွဲနေကြသူများ ( Henry Aung ) — HiveHustlers
@kachinhenry, thank you for supporting the HiveBuzz project by voting for our witness.
You are welcome.... !PIZZA. !LOLZ
ဟုတ်တယ်။ တစ်‌နေ့ တစ်ပုဒ်လောက်မှမတင်ရရင် တာဝန်မကျေ သလိုပဲ။
နေ့စဉ်ဆိုတော့ တာဝန်တခုလို ဖြစ်လာတာပေါ့။ စာရေးတယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ အကျင့် ဖြစ်ပါတယ်။ !PIZZA. !LOLZ. !LUV
နောက်ဆို အပြင်ထွက် သောက်စရာ မလိုလောက်တော့ဘူး။
Hive မှာတင် သောက်လို့ရလောက်တယ်
အံမယ်... အပြင်မှာ မူးတာနဲ့ Hive ထဲမှာမူးတာ အရသာမတူဘူးရယ်...😀😀😀 !LOLZ. !PIZZA !LUV
ကိုဟင် post ကိုဖတ်ပြီးမျက်နှာပြောင်ခဲ့ပါတယ်...hive မှာစာမရေးရမနေနိုင်ပါဘူး....
@kachinhenry, I sent you an $LOLZ on behalf of @asterkame
ကိုဟင် လည်း LUV အပိုပေးလိုက်ပါတယ်။ !PIZZA. !LOLZ. !LUV
hive ကိုတော့စွဲနေပြီ အကို
စွဲရမယ်လေ...သူက လည်း စွဲစရာ ကောင်းနေတာကိုး... !PIZZA. !LUV. !LOLZ
ဟိုက်ဗ်ဈေးကလဲတက်လာ တရက်မှာ တစ်ပုဒ်ရေးမတင်ရရင်လဲ ဗိုက်နာတာလိုလို ဗိုက်ဆာတာလိုလို Hive ဘလော့ကိုမဖွင့်ရရင် ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်လာနေပီဗျ။ !LOLZ ကျနော့မှ lol တိုကင်ပဲရှိလို့ မန့်လိုက်ပါသည် စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။
ဒီလိုပါပဲ... နောက်ဆို အိပ်မရတဲ့ ညတွေပါ ဖြစ်လာအုံးမယ်... !PIZZA. !LOLZ. !LUV
Hive ဆွဲနေတာတော့အမှန်ပဲ ဆာဟင်ရေ...
တစ်နေ့စာတစ်ပုဒ်မှ မတင်ရရင် တုန်တုန်ရီရီဖြစ်လာတာ။ 😅
ဘီယာ တဘူးလောက်ကစ်ပြီးစာ ရေးလိုက်ရင် ok ပြီ။ 😀😀😀 !PIZZA. !LOLZ. !LUV
Hive စွဲနေတာတော့ သေချာပါတယ်အစ်ကို...!PIZZA !LOLZ
@kachinhenry, I sent you an $LOLZ on behalf of @uthantzin
စွဲရမယ်လေ...သူက လည်း စွဲချင်စရာ ကောင်းနေတာကိုး...😀😀😀 !PIZZA. LOLZ. !LUV
ညနေ ညနေ စည်တယ်လေ ဟိုက်ဂရုမှာ။
ဟိုက်တွေ စိမ်းလို့ ပျော်သလေလေ။
မ ရေးရရင် မနေနိုင်ဘူး
အလိုဗျာ ဟိုက်တွေနဲ့ မူး။
အံမယ် သံဇဉ်လေးနဲ့... !PIZZA. !LOLZ. !LUV
ကျနော်တော့် ကိုယ့်လူတွေကို !LOLZ or !PIZZA တစ်ခုကတော့ ပေးဖြစ်တာပဲ ။ နောက်ထပ် !LUV ပေးနိုင်အောင် စုနေတယ်ဗျ။
@nyinyiwin, sorry! You need more $LUV to use this command.
ကောင်းပါလေ့... အခုတော့ ကိုဟင် ပေးလိုက်ပါ့မယ်...😀😀😀. !PIZZA. !LUV. !LOLZ
kachinhenry tipped asterkame (x1)
asterkame tipped kachinhenry (x1)
@kachinhenry(11/20) tipped @nyinyiwin (x1)